Sizing sy Buying Guide ho an'ny sakafon'ny rindrina
Hobbies & Activities Hiking
Rovaky Amin'ny Nomery: Tari-dalana sy Fividianana Buyer
Ny havana rehetra
Ny fonosana mivangongo dia natao amin'ny fomba roa: Ny volavolan-tseranana (ny habetsaky ny entana mitondra azy - nomena kobay na litatra) ary ny lava ravina (na ny halavan'ny torso lava) dia natao hamolavola azy.
Alefaso any amin'ny Goldilocks ny fialan-tsasatra sy ny hadisoana, kanefa azonao atao ny mamadika ny mahazatra amin'ny kitapo tsara indrindra amin'ny alalan'ny fianarana ny fomba handrefesana ny halaviranao sy handinihana ny habetsaky ny entana ilainao mandritra ny dia iray.
Ahoana no fomba handrefesana ny halaviran-dainao ho an'ny kitapo iray?
Mba handrefesana ny halaviranao, dia mila milina matevina sy fanampiana avy amin'ny namana ianao. Angataho ny namanao mba handrefesana ilay sombin-tany nalaza teo am-pototry ny tendanao ka hatrany amin'ny teboka iray eo anelanelan'ny valan'ny hipbona. Ny fametrahana ny vokatra dia ny halaviran'ny torso izay hividiananao rehefa manamboatra kitapo.
(Tsidiho ny teboka misy eo amin'ny elany misy anao - izany hoe ireo teboka avo amin'ny hipbona anao - amin'ny fametrahanao ny palmie eo amin'ny andilanao, rantsan-tànana amin'ny endriky ny hipbona. Ny sakaizanao dia afaka mandrefy avy hatrany eo amin'ny tendanao.)
Manao ahoana ny hasarobidin'ny vatako?
Ny mpanamboatra rehetra dia mamaritra ny isa feno amin'ny litera na kobika (matetika roa); Fa inona marina no dikan'izany? Ity lisitra manaraka ity dia natao hanomezana anao ny lalaon'ny paroasy momba ny karazana paosy ilainao amin'ny karazana fitsangatsanganana.
Mazava ho azy, ny karazan-tsakafo mety aminao dia miovaova arakaraka ny fahazaran-dratsinao. Afaka maka fotoana maromaro ao anatin'ny andro maromaro ny fitaovana entina an-tsokosoko ho an'ny olon-kafa. Ny mpihetsiketsika toa anao kosa, dia mety tsy hanana teti-bola na fahalalana mahazatra ho an'ny fitaovana maoderina kely kokoa, marevaka kokoa, lafo vidy - izay midika hoe fitahirizana lehibe kokoa mba handrafetana fitaovana lehibe kokoa.
Raha misy fisalasalana, alaivo ny enta-mavesatra hiketrika ao anaty kitapom-batsy vitsivitsy (mora ampiasaina) ary ento any amin'ny toeram-pivarotana ao an-toerana mba hitsapana fonosana vitsivitsy. (Ny ankamaroan'ny fivarotana fitaovam-pifandraisana dia hanana sandaingotra azonao hamenoana ilay entana mba hitsapana ny fahatsapany fa ambany ny lanjany - saingy tsy hiankina amin'ny olana lehibe izany.)
Andro fitsangatsanganana: 500 hatramin'ny 1.800 kilaometatra (8 hatramin'ny 30 litatra)
Mba hametrahana ireto tarehimarika ireto: Ny fonosana 500-kibika dia mivoaka amin'ny habetsaky ny entana ao anaty kitapo kely iray ao amin'ny akanin-jaza, izay matetika dia tsy ampy kely mba hitazona ordinatera na binditra manontolo. Rehefa fenoina vatosoa dia misy kitapo 500 kilaometatra eo ho eo ka afaka mitazona kely (2L na kelikely) amin'ny blasfemia; lembalemba mahamay be loatra (ambony sy ambany); jiro matevina sy matevina, kapila maivana sy fonon-tanana, kitapo maivana maivana, kofehy mena , ary balsama roa. Matetika aho no mitondra ny fakantsariko ao am-paosiko.
Tiako ity karazana pake ity mandritra ny andro fohy amin'ny andro mafana - fa raha tsy tsara ny fepetra na tsy manana ny rafi-pandaharana napetraka ao anatin'ny fotoana fohy, dia manoro aho pack iray lehibe kokoa. (Ankasitrahako ny fametrahana pake 1000 ka hatramin'ny 1700 kilaometatra, arakaraka ny toetr'andro sy ny halavan'ny fanandramana ataoko.)
Inona no tokony hatao mandritra ny Dayhike voalohany (lisitra fanontana printy)
Fivarotana mihoatra ny alina: 2,400 ka hatramin'ny 3,000 kilaometatra (40 hatramin'ny 50 litatra)
Miezaka ny tsy hanamboatra ny kitapoko aho miaraka amin'ireo zavatra kely mipoitra avy any ivelany - fa ny fifehezana zavatra lehibe toy ny kitapo fatoriana na kitapo ho eny ambony na ao ambany ny kitapo tsotra dia ny fanaovana labozia kely (relativina) kely mandritra ny alina fiakaran'ny. Miankina amin'ny haben'ny habeny raha mitazam-potsiny ianao amin'ny ririnina na tsy hijanona eo akaikin'ny loharano rano, noho izany dia afaka mitondra fitony sy rano fanampiny ianao.
Inona no atao rehefa mandehandeha mandalo (lisitra fanontana printy)
Ary mazava ho azy fa raha manana vola ianao hampiasa vola amin'ny fitaovana mahaleotena (na ny fahalalana hahazoana ny anao manokana) dia afaka mahazo anao miaraka amin'ny kitapo kely sy maivana kokoa.
Fialan-tsasatra mandeha amin'ny dia: 3 000 kilaometatra (50 litatra) ary ambony
Ny dian-tariby maromaro dia mitaky ny tanjaky ny mpanamory.
Ny tranolay, ny torim-pasika, ny kitapom-batsy sy ny fitaovana fikarakarana sakafo (anisan'izany ny lavanila, vilany, fitaovana sy solika) no zavatra lehibe indrindra. Satria mbola ho ela kokoa ianao dia mila zavatra hafa izay mety ho levona na ampiasaina amin'ny fomba rehetra: ny solika, ny sakafo bebe kokoa, ary ny mety ho endriky ny akanjo.
Antony hafa tokony hikolokolo ny sigara lehibe iray, raha toa ianao ka manamboatra fitaovam-piadiana ho an'ny olona mihoatra ny iray, mahatsinjo ny toetr'andro tsy hay lazaina, mitsangantsangana amin'ny ankizy na biby fiompy, na angamba tsaratsara kokoa ny fomba fiainanao. Tsarovy, tsy misy ny tsara na ny ratsy raha ny momba izany - misy ihany ny miasa ho anao.
Kitapo lehibe kokoa - indrindra raha vantany vao tafiditra ao anatin'io dingana goavam-be io ianao - manolora top topa izay manaisotra sy mivadika ho fonosana lomotra mandritra ny andro maromaro. Tena zava-dehibe izany, indrindra raha toa ianao hanangana tobim-pitombazana eny an-tendrombohitra ary hijery avy eo.
Teny iray momba ny faneriterena fametahana sy fanerena avy any ivelany
Tena mahavariana ny bakteria. Mitazona ampaham-pivarotam-panafody izy ireo ao anaty fonosana lehibe, ary manampy amin'ny fitazomana ireo entana kely feno vidy izay afaka mandeha eo akaikin'ny vatanao. Amin'ny tsindry, azonao ampiasaina koa ny bakteria fingotra mba hifehezana zavatra fanampiny any ivelan'ny fonosana.
Ireo teboka hafahafa avy any ivelany dia mety ho azo ampiasaina. Mitady kitapo iray aho izay manana kitapo roa ho an'ny polisy mitsangatsangana , tokony hanapa-kevitra ny hitondra azy ireo ianao. Ny kitapo ivelany dia tonga lafatra noho ny fitazonana ny sarony ivelany; Ny poketrany dia tsara. Tsy dia adala firy aho momba ny rojo daisy amin'ny fonosana iray.
Raha mikasa hanao ririnina amin'ny ririnina ianao, mitadiava kitapo iray izay manana paosin-doko haingana ho an'ny fivelomana tsy azo avela ho toy ny fanandramana sy fako.
Vitsy ny toro-hevitra momba ny fisafidianana kitapo
Manao akanjo tahaka ny mandeha aleha rehefa mandeha any amin'ny mpivarotra. Raha toa ka mihodina na misamboaravoara ny poketrany fihodinana amin'ny poketranao raha te hiaraka amin'ny pataloha tianao indrindra, dia te hahafantatra mialoha ianao.
MIFARANA ny fehikibo hipetaka manodidina ny hipbôsanao, fa tsy ny tandranao.
AOKA hatao ny mpivarotra eo amin'ny tolotr'asany mba hamenoana ny kitapo miaraka amin'ny sandbags ary avelao hiaraka amin'ny kitapo entina mandritra ny fotoana fohy.
Tandremo ny toerana hahatsapanao ny lanjany - ny ankamaroany dia tokony hiorina eo amin'ny andilanao, fa tsy ny sorokao.
MAMPIASA ny paompy fametahana pensée ianao mba hanampiana ny manavesatra ny lanjan'ny soroka (miaraka amin'ny loko mampiaraka kely).
TSY saro-kenatra ny mangataka fanampiana amin'ny rafitra fananganana fonosana. Tokony hitazona ny kitapo handanjalanja sy hanakaiky ny vatanao.
MIEHENO ho an'ny fidirana haingana, akanjo ivelany, mba hitahirizana ireo zavatra tianao hahatongavanao mivantana: Mandefa ranomandry, tavoahangy rano, fakantsarinao ary ny sisa.
MAHAFOY koa ny hametraka kitapo ho an'ny "mitaingina" - matetika izy ireo no miorina mafy sy maivana.
Miezaha mijery packs fara fahakeliny alohan'ny hividiananao.
Inona no dikan'ny hoe "Post-holing" amin'ny alàlan'ny fiaramanidina?
Review of the Osprey Exos 38 Pack
Inona no atao hoe lolo?
Inona no atao hoe slackpacking?
Pit Zips: Inona izy ireo ary nahoana izy ireo no mbola mitoetra
Tokony ho hafiriana no tokony hodiako ny fandehandehanako?
Fitsipika momba ny fitetezam-paritra
Toeram-pialan-tsasatra azo antoka ao amin'ny Weather Hot
Fomba hanomezana rano matevina amin'ny kitapo plastika
Ny fomba fiakanjo tsara ho an'ny fitsangantsanganana amin'ny ririnina: Layering fototra
Antony 5 Nahoana Ianao no Tokony Hialanao?
Ny Kodiarana Spinning dia mamadika ny fibre ho any amin'ny yarn
Ahoana no hahatonga azy ho namana tsara kristianina?
10 karazana fiompiana an-dranomasina
Top 5 Best Cardio amin'ny MMA
Firaisana Irlandey sy Fandevenana an-tserasera
Inona no azoko amboarina ho an'i Rose Doré izay tsy dia lafo loatra?
Fantaro ny endrik'ireo fanambarana fahadimy amin'ny teny latinina
Vokatry ny Fianarana Baiboly Ara-panahy: Fahatokiana
Inona no atao hoe fanapahana fanamiana?
Teny sy fiteny - All
Manorata asa tsotra tsotra
Leo ny Liona - Zodiac mirakitra
Fahatakarana ny Factorial (!) Amin'ny Matematika sy Statistika
Ny fomba hanamboarana "Répéter" (averina) amin'ny teny Frantsay
Ahoana ny fomba fitsapana môtô ampiasaina
Antony ho an'ny fikomiana Kochba Bar
Ny fiara taloha nampiasaina na ny fiara vaovao nampiasaina, iza no tsara kokoa?
Mividy ny bisikao havanana ho anao
Kolontsaina, Ady ary Fampivoarana lehibe amin'ny tantaran'ny Aziatika
SAT Score Comparison amin'ny fidirana ao amin'ny Colleges Illinois
Matory ve ny bibikely?
Ahoana no hahatonga ahy ho lasa manam-pahaizana momba ny maha-olona?